Tag: Email Suuq | Martech Zone
Tag: Suuqgeynta Iibsiga
Haysashada goob suuqgeyneed oo si wanagsan loo hagaajiyay oo otomaatig ah ayaa ah shay muhiim u ah goob kasta oo ka mid ah goobaha ganacsiga e-commerce. Waxaa jira 6 ficil oo muhiim ah oo ay tahay in istaraatiijiyad kasta oo suuqgeynta e-commerce ay tahay in la geeyo marka la eego fariimaha: Kobcida Liiskaaga - Ku darida qiimo dhimis soo dhaweyn leh, guul-guuleysi, duullimaadyo, iyo olole ujeedo bixitaan si aad u korto liiskaaga oo aad u bixiso Dalab adag ayaa muhiim u ah kobcinta xiriiradaada. Ololayaasha - Diridda iimaylo soo dhaweyn ah, wargeysyo socda, bandhigyo xilliyeed, iyo qoraallo baahinta si kor loogu qaado dalabyada iyo
Waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan u wanaajin lahayn qaar ka mid ah safarrada iimaylka ee macmiilka oo horumariya noocyo badan oo badeecooyin ah boggooda WordPress. Mid kasta oo ka mid ah qaab-dhismeedka iimaylka ActiveCampaign ee aanu dhisnay waxa si heersare ah loogu habeeyey sheyga uu horumarinayo oo uu ku siinayo waxa ku jira. Halkii aan dib u qori lahayn wax badan oo ka mid ah waxyaabaha mar hore si wanaagsan loo soo saaray looguna habeeyey barta WordPress, waxa aanu ku dhex milmay boggooda email-kooda. Si kastaba ha noqotee, balooggoodu wuxuu ka kooban yahay badeecooyin badan sidaas darteed waa inaan sameyno
6 Hababka ugu Wanaagsan ee Kordhinta Soo Noqoshada Maalgashiga (ROI) ee Suuqgeyntaaga iimaylka
Isniin, April 4, 2022 Isniin, April 4, 2022 Vladislav Podolyako
Markaad raadinayso kanaalka suuq-geynta oo leh soo celinta ugu xasilloon oo la saadaalin karo ee maalgashiga, kama foga suuqgeyn email ah. Marka laga reebo inaad tahay mid la maarayn karo, waxay sidoo kale ku siinaysaa $42 doolar kasta oo lagu kharash gareeyo ololaha. Tani waxay ka dhigan tahay in xisaabinta ROI ee suuq-geynta iimaylka ay gaari karto ugu yaraan 1%. Boostada baloogga, waxaanu kaa caawin doonaa inaad fahamto sida email-ka suuqgeynta ROI u shaqeeyo - iyo sida looga dhigo mid ka sii fiican.